सधैं खुशी र सुखी कसरी रहने ? ६ टिप्सहरु – Sandesh Munch
सधैं खुशी र सुखी कसरी रहने ? ६ टिप्सहरु
May 24, 2020 841
संसारमा खुशी र सुखी भन्ने ‘सब्द’ सबैको प्यारो हुन्छ तर खुशी र सुखी त्यहीँ हुन्छ, जो सधैं खुशी हुने दृढ़ इच्छा राख्दछ । हामी जीवनमा जे चाहन्छौ, ढिलो चांडो त्यहीँ पाउदछौ । खुशी जीवन नै चाहाने ‘हो’ भने हामी आफू सधैं खुशी रहने अठोट गर्नै पदर्छ, खुशी रहने हाम्रो इच्छा शक्ति दृढ हुनु पदर्छ । यो संसारमा जसले आफूलाई खुशी राख्ने इच्छा राख्द्छ, जो संग खुशी रहने विस्वाँस छ, त्यो व्याक्ती खुशी भएरै छोड्छ ।
“सास रहुन्जेल म खुशी भएर छोड्छु, जिन्दगीमा हजारौं बाधा अवरोधहरु आएता पनि म खुशी भएरै छोड्छु,मेरो खुशीलाई कसैले रोक्न नसकोस्, कसैले छेक्न नसकोस् ।” भनेर जसले दृढ़ इच्छा शक्ति राख्द्छ, त्यो व्याक्ती खुशी भएरै छोड्छ ।
स्वार्थी , लोभी, घमण्डीहरु यो दुनियाँमा खुशी रहन सक्दैनन् । अध्यारोमा उज्यालो खोज्ने र देख्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ । खुशी रहनको लागि हाम्रो दैनिक जीवनमा जे गर्छौ, हामी त्यहीँ काममा रमाउन सक्नुपर्छ । खुशी र सुखी जीवन जिउने संसारका महान व्याक्तीहरु के भन्छन् त ?
एक महान व्याक्ती काकर्लामिल भन्छन् -“आनन्दका साथ गुनगुनाउदै श्रम गर्नाले थकावट हुँदैन,र थकावटले मनमा असर पार्न पनि पाउदैन ।” अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपटि अब्राहम लिन्कन भन्छन “मानिस जति खुसी चाहन्छ,त्यति नै खुशी रहन्छ ।” लिन्कन भन्छन “मन भित्रको सुन्दरताले नै बाहिरी संसार सुन्दर र उज्यालो देखिन्छ ।” दार्शनिक अल्वर्ट हार्वडअले भनेका छन -“बिहान दश बजे सम्म प्रसन्न रहनुहोस ,बाँकी दिन आफ्नो ख्याल आफै राख्छ।प्रारम्भ प्रसन्नका साथ सुरु गर्नुहुन्छ भने दिन भर चुस्त र स्वास्थ रहन सक्नु हुन्छ । यी महान दार्शनिकहरुको सुझावहरुलाई आत्मासात गर्न सके हामी अवश्य! पनि खुशी जीवन जीउन सफल हुनेछौं ।
खुसी र सुखी हुन मदत गर्ने ७ टिप्सहरु
१) खुशी रहने संकल्प गरौं
यो संसारमा जसले आफूलाई खुशी राख्ने इच्छा राख्द्छ, जो संग खुशी रहने विस्वाँस छ, त्यो व्याक्ती खुशी भएरै छोड्छ । सास रहुन्जेल म खुशी भएर छोड्छु, जिन्दगीमा हजारौं बाधा र अवरोधहरु आएता पनि म खुशी भएरै छोड्छु भन्ने जसले द्रढ इच्छा राख्द्छ, त्यो व्याक्ती खुशी भएरै छोड्छ ।
२) सकारात्मक कुराहरू तिर मात्र ध्यान दिने गरौं
संसारमा राम्रो र नराम्रो दुवै हुन्छ । हरेक िचजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ । संसारका हरेक चित हरेक कोण बाट हेर्न सकिन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक । हामी हरेक चिज लाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नू पर्छ । राम्रो र सकारात्मक कुराहरुलाई आत्मसात गर्न सके हामी अवश्य! खुशी र सुखी बन्नेछौ ।
३) योग र ध्यान गरौं
विभिन्न बैज्ञानिक अध्ययनहरुले पनि योग र ध्यान गर्नाले खुशी जीवनमा सहयोग पुग्ने कुराहरुको प्रमाणिात गरि सकेका छ्न । विश्वमा योग र ध्यान गर्ने मानिसहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । योग र ध्यानले सकारात्मक उर्जा मिल्नुका साथै हामीमा भएको तनाव कम गर्दछ ।
४) आफू सधैं खुशी र सुन्दर भएको कल्पना गरौं
हाम्रो कल्पनाले पनि हाम्रो जीवन लाई असर गरिरहेको हुन्छ । हामी जे गर्छौ कल्पनाको साहाराले नै गर्ने गर्दछौं । हामी जे सोँच्छौ, जे कल्पना गर्छौ हामी त्यहीँ बन्छौ । हाम्रो भित्री मनमा जे सोच्छौ, बाहिरी सांसारमा त्यहीँ देखिन्छौ ।
४) अरुको भलो र प्रगतिको बारे सोचौं
जीवनमा हाम्रो बारे मात्र सोच्ने नगरौंनि:स्वार्थ भावले अरुको बारे पनि सोचौं , अरुको प्रगतिबारे सोचौं । हाम्रो प्रगतिमा जति खुशी हुन्छौं , अरु व्याक्तिको सफलतामा त्यति नै खुशी हुन सिकौं । कसैको दु:खको बोझ हल्का गर्न सके, कसैलाई हौसला भरोसा िदन सके, कसैको बगिरहेको आँसु पुछ्न सके, कसैको लागि त्याग गर्न सके त्यो जतिको आनन्द र खुशी हाम्रो जीवनमा कहिल्यै मिल्ने छैन ।
६) बिहान छित्तै उठ्ने गरौं
बिहान छित्तै उठ्ना ले दिन भर ताजा भइन्छ,यो कुरा बिहान छित्तै उठ्नेहरुलाई अवश्य! थाहा होला । बिहानै उठेर नुहाएपछि राम्रो कुराहरु पढ्ने ,गित संगित सुन्ने ,सकारात्मक कुराहरु सुन्ने/ पढ्ने गर्नुपर्छ।संसारका अधिकांस सफल व्याक्तिहरु बिहान छित्तै उठेर आफ्नो दिन्चर्य सुरु गर्ने गरेका छन ।
७) खानपिनमा ध्यान दिने गरौं
संसारमा खान नपाएर भन्दा खान नजानेर धेरै मान्छे मर्छ्न । हाम्रो खुशी र सफल जीवनमा पनि हाम्रो दैनिक खानपिनले धेरै असर गरिरहेको हुन्छ। खानपिन सम्बन्धि भर पर्दो किताबहरु पढेर ज्ञान हाँसिल गरौं । सकभर हाम्रै भान्सामा पाकेको खाना खाने गरौं । प्रशस्त पानी पिउने बानी गरौं । जति सक्दो ताजा फलफूल र सागसब्जी खाने गरौं ।
Prevआजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने
Nextभर्खरै प्राप्त खबर तीन सय कैदीबन्दीलाई कोरोना संक्रमण देखियो
दुखद समाचार ! कोरोनाबाट साउदी अरबमा एकै दिनमा ७ नेपालीको मृत्यु, १३ सय बढी संक्रमित